Guyyaa har’aa Caamsaa 20,2007 barattootni Yunivarsitii ‪#‎BuleeHoraa‬ Fincilaa Diddaa Gabrummaa haalaa namaa gammachiisun itti fufaniiru. -
Guyyaa har’aa Caamsaa 20,2007 barattootni Yunivarsitii ‪#‎BuleeHoraa‬ Fincilaa Diddaa Gabrummaa haalaa namaa gammachiisun itti fufaniiru.
bilisummaa May 29, 2015	Leave a comment
Walgahi ganamaa sa’aa saditti sababaa fincilaa waa’ee filmaatarratti ka’ee mari’achiisuf tattaaffi ergamtootni wayyaanee godhan harkaa fashaleessaniru. Akkumaa walgahiin kun jalqabeen, barattootni Oromoo gaafiwwaan armaan gadii kaasani walgahichaa dhiitani bahaniru:
1.Walgahiin kun afaan Oromootin nuuf haa jalqabuu
2. Afaan Oromoo Afaan Federaalaa ta’u hin qabu warra jedhuu waliin wal gahii hin teenyu
3. Filannoon godhamee kan kijibaatii
4. Ammaa boodaa kijibaa mootummaa kanaa dhagawuu hin feenu
5.Caamsaa 20n Oromoodhaaf guyyaa gaddaati diinaa Oromootif garuu guyyaa gammachuuti
6.Mootummaan korojoo hatu motummaa osoo hin tahin shiftaa waan taheef , shiftaa waliin maariin goonu hin jiru
7.Filannoo baranaa kanarratti KFOn akka moowatee dhibbaan dhibbatti itti amanna
AKkas Barattoota Y. BuleeHoraa !
Qabsoon KFO hanga Oromiyaan bilisoomtutti itti fufa!
Previous Tokkummaa maqaa ABO jijjiiramaatin labsame ilaalchisee Ibsa ABO B/G/Kamaal Galchuun durfamu irraa keename.
Next Ibsa Gurmuu Qabsaawota fi Miseensota Adda Bilisummaa Oromoo (GQM-ABO) …